Nytaovolo2nde3-2012's blog - Page 3 - Ny taovolo Malagasy - Skyrock.com
Edited on Friday, 30 November 2012 at 12:00 PM
Randrana fanao amin'ny fapankaram-bady
Antsoina ihany koa hoe bango tsotra. Soritana 4 avy ao an-tampon-doha ny volo, avy eo faranana ambaratonga 4 na 5. Randranina madinika dia akambana tadiana 2, ary ampifampidirina ao an-katoka avy eo. Tsy mifidy sokajin-taona ny tanaivoho. Niparitaka nanerana ireo Faritra hafa izy io. Fanao amin'ny andavanandro